“ Waxaa Inoo Furan In Aan Tallaabo Militari Ka Qaadno Iiraan…” Sucuudiga | Salaan Media
“ Waxaa Inoo Furan In Aan Tallaabo Militari Ka Qaadno Iiraan…” Sucuudiga
Wasiirka arrimaha dibadda Sucuudiga ayaa sheegay in hadda ay u furan tahay tallaabooyin dhowr ah oo kamid tahay mid militari kaddib markii dhawaan weerar lagu qaaday xarumihii shidaalka, weerarkaas oo lagu eedeeyay Iiraan.
“Inkasta oo Sucuudiga uusan dooneyn dagaal, Iiraan ayaa lagala xisaabtami doonaa weerarkii diyaaradaha Drones-ka ay ku qaadeen xarumaha shidaalka”,ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda, Caadil Al Jubeyr.
Baaritaan uu Mareykanka soo saaray waxaa lagu sheegay in weerarka ay ka dambeeysay Iiraan.
“Waxaan eegi doona qaababka inoo furan hadda ee na horyaal, go’aan ayaan gaareynaa” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda Sucuudiga oo la hadlayay BBC.
Madaxweynaha Iiraan, Xasan Ruuxaan ayaa diiday inuu la kulmo madaxweyne Donald Trump xilli dalkiisa lagu soo roggay cunaqabateyn
Madaxweynaha Iiraan, Xasan Ruuxaan ayaa diiday inuu la kulmo madaxweyne Donald Trump xilli dalkiisa lagu soo roggay cunaqabateynImage caption: Madaxweynaha Iiraan, Xasan Ruuxaan ayaa diiday inuu la kulmo madaxweyne Donald Trump xilli dalkiisa lagu soo roggay cunaqabateyn